फिजिसिन डाक्टरहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा सुरु – Saurahaonline.com
फिजिसिन डाक्टरहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा सुरु
चितवन, २८ फागुन । दिर्घकालिन रुपमा विग्रेको मृगौलालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा विज्ञ चिकित्सहरु सम्मिलित दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा सुरु भएको छ ।
“सुरक्षित मृगौला, सुरक्षित जीवन” भन्ने नारा सहित अन्तराष्ट्रिय मृगौला दिवस अवसर पारेर फिजिसियन विशेषज्ञ डाक्टरहरु सम्मििलि सम्मेलन सुरु भएको हो ।
सोसाईटी अफ ईन्टरनल मेडिसिन अफ नेपालको आयोजना सुरु भएको सम्मेलनको सोसाईटीका संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर डा.सञ्जिन ढुङ्गेलले गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै प्रोफेसर डाक्टर ढुङ्गेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास समय अनुसार अपडेट र परिस्कृत हुनुपर्ने बताए ।
उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनितिक हस्तक्षेप मुक्त क्षेत्र घोषण गर्ने सबै एक क्षेत्र एकजुट हुन आग्रह गरे ।
हरेक फिजिसियन डाक्टरहरुले समय अनुकुल नया पद्धती अपनाउन सम्मेलन उपयोगि हुने बरिष्ठ फिजिसियन एवं सोसाईटीका सचिव डा. शितल अधिकारीले बताए । सम्मेलनमा देशभरबाट २ सय ५० जना बरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टरहरुको सहभागी ररिह हाल सम्म उपलब्ध भएका फिजिसियन, क्यान्सर, मुटु, फोक्सो, पेट, सर्प दंश लगायतका ५० वटा कार्यपत्रमा छलफल भईरहेको सोसाईटी अफ ईन्टरनल मेडिसिन अफ नेपालका महासचिव एवं टिचिङ्ग हस्पीटल काठमाडौका बरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर पकज पन्तले जानकारी दिए ।
सम्मेलनका क्रममा पूराना अनुभवी सर्जन डाक्टरहरुको अनुभव आदानप्रदान गर्दैै छलफल समेत गरिएको थियो । सोही अवसरमा बरिष्ठ मृगौला रोग बिशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर सुधा खकुरेललाई सम्मान गरिएको थियो । संस्थाका अध्यक्ष डा. लवन्दरसिंह जोशीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्धघाटनशत्रमा चितवन संयोजन अध्यक्ष डाक्टर भोला रौनियार लगायतले बोलेका थिए ।